Umbuzo uwukuthi, lapho ukuze uthole inombolo ye-VAT (inombolo kamazisi we wentela), kungenzeka ukuba isakhamuzi ezimweni ezimbalwa.
Ngokuvamile, lokhu nobunzima livela umsebenzi, lapho IIN ngezinye izikhathi kuba mhlawumbe idokhumenti main. Manje kuba khona ukubaluleka anda emikhakheni ehlukahlukene emphakathini. Inombolo manje siyadingeka yamukele iphinde isebenze ngesikhathi sokuzalwa, nabantu bakwamanye amazwe ukuze uthole umsebenzi okwesikhashana.
Wabonakala hhayi kudala. Uhulumeni waseRussia e 90 zokuqala owethulwa yezinhlangano ikhodi ivumela isethi izinombolo ukuhlonza igama lenkampani, ubunikazi kanye nokubhaliswa ikheli. Khona-ke, leholele ngo-1997, isidumbu osomabhizinisi ngabanye bebelokhu ukuhlanganiswa balezi zikhungo.
Kodwa okuningi - ngaphezulu, futhi ekupheleni 21 leminyaka th kwanqunywa ukunweba umkhuba yokuqanjwa kwamagama VAT bonkhe bantfu.
A TIN ukuvakashela siqu
Sizozama ukuphendula, lapho ukuthola TIN, unga ngokushesha futhi ngaphandle kwezinkinga.
Umzimba kuphela unesibopho elikhiphe kuleli gumbi - kuba Federal Tax Service. Ayikho abaxhumanisi akuzona lapha, futhi uma kukhona iziphakamiso nasesikhathini cindezela bese ku-intanethi, lena ukukhwabanisa okumsulwa. Iqiniso lokuthi iziphathimandla zentela ngakho kwaba lula inqubo bokunikeza izinombolo, ukuthi ilawula isakhamuzi ongenalwazi kakhulu.
Umuntu kufanele nje uthathe iphasiphothi yakho nokuvakashela ihhovisi lentela ngamahora ekutholeni abantu. Manje wonke amakamelo, ukuphi abahloli bayo, ifakwe ulwazi imele. Abakwazi ukuthola isicelo isampula inombolo ye-VAT. Kufanele ugcwalise bese uthumela umuntu onesibopho, futhi ngemva kwesikhathi esithile ukuze beze uthole ephepheni.
Ngezinye izikhathi kukhona ubunzima ukulotshwa ukwelashwa umbhalo ehhovisi lentela. Lokhu akulutho inkimbinkimbi. Intela, okuyinto ingatholakala INN, njalo ukusebenza inhlangano, okuyinto ngenkokhelo okuzisholo ugcwalise isicelo. Njengendlela yokugcina, kwi imithetho uligcwalise ukweluleka umhloli. Lizoba kuphela asayinde.
Kunoma ikuphi, zonke manipulations, kuyinto efiselekayo ukukhiqiza mathupha. Ungasebenzisa amasevisi abameleli, kodwa ukuba benze izenzo ezinjalo kuzodinga amandla notarised lommeli.
A TIN ngokusebenzisa isevisi ekulayini
Okwesikhathi esithile iziphathimandla zentela baye bazama nesimanje inqubo kanye unciphise isikhathi ukulungiselela imibhalo ethile. Ngenxa yalokho, ngo-FNS iwebhusayithi isevisi lapho ungathola inombolo ye-VAT, cishe ngaphandle kokushiya ekhaya.
I algorithm okulandelayo lapha:
- ukuqala ukuvula isitatimende ikhasi indawo ku-akhawunti umuntu wemvelo;
- ezansi kwekhasi ukuvula isixhumanisi "Gcwalisa isicelo esisha";
- In the iwindi ufaka izinhlamvu ozibona esithombeni;
- ukuthi ugcwalisa zonke isicelo izikhala, qiniseka ukuthi zilondoloze idatha;
- ukuthumela isicelo bese ulinda impendulo, ukuthi kucatshangelwe.
Manje nje kudingeka ulinde impendulo. Ukuze udumo intela, isevisi, lapho ungathola TIN ku-intanethi, owethulwa umzila kokulandela application service. Lapho braking, ukucabangela uhlale kungenzeka ukungenela kusenesikhathi enqubeni.
Ngokuphathelene isikhathi, Federal Tax Service ezigxile amayunithi abo ngenkathi behamba imibhalo. Ngakho-ke, ukuze bathole TIN, eMoscow inikeza ngesikhathi esisodwa abanqunyelwe sona njengoba inspectorates lesifunda. Izinsuku kuyafana futhi engaba mihlanu izinsuku.
Nokho, ngaphandle evakashele ukuhlolwa namanje akwanele. Kuphela uma kusetshenziswa imali yabakhokhi bentela noma kummeleli wakhe wezomthetho ingathola idokhumenti eside elindelwe. Ngokwemvelo, ukuthi uyonikwa abazali bengane. Sidinga nje ukukhombisa ipasipoti wakho kanye nesitifiketi sokuzalwa kwelungu lomkhaya abasha.
Inqubo inhlangano yokuthola TIN iya ngendlela ehlukile. Kulokhu, inombolo kamazisi inikezwa ngesikhathi esifanayo ne ukubhaliswa inhlangano engokomthetho, futhi ekususweni irejista esihambisana naye ngaso sonke isikhathi.
Izinhlawulo kanye mortgages
Usonhlalakahle. Jobe Umsebenzi
Pseudotuberculosis: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Urolithiasis. Ukwelashwa noma ukuzilimaza?
Njengoba kule imeyili "Mile" ukususa zonke izinhlamvu ngesikhathi esisodwa?